Somaliland: Eng: Faysal Cali Waraabe Oo Ku Baaqay In Hablaha Reer Somaliland Ee Muqdisho Taga Fays-buugga Lagu Nashuushadeeyo - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Eng: Faysal Cali Waraabe Oo Ku Baaqay In Hablaha Reer Somaliland...
“Hableheennii yaryaraa baa looga heesayaa Xamar, kuwaa Xamar tegay ee yar-yarna Faysbuugga ku caaya, waa Khaayimiin, waa inaynu Faysbuugga ka dhignaa Fidmo ..” Guddoomiyaha UCID Faysal Cali Waraabe
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, ayaa weeraray Hablaha Somaliland u dhasha ee taga magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya, isaga oo ku baaqay in Faysbuugga (Facebook) lagu caayo Gabdhaha Soomaaliya taga, waxaana Dadku inta badan u fahmeen in uu u jeedo Gabdho Fannaaniin ah oo bilihii u dambeeyey ku sugnaa Muqdisho, sida Yurub-geenyo iyo Xamda-yar.
Guddoomiye Faysal Cali Waraabe oo Taageerayaal kula hadlayey Hargeysa, waxa uu sheegay in haddii Xisbigiisu guulaysto uu soo celin doono cadaaladda iyo sinnaanta iyo ku dhaqanka Tawxiidka. “Dalkeenna tashuushka ka daaya, ha innaga, dalkeenna ha innaga ceebaynina, Anigu waxaan ballan idiinku qaadayaa inaynu Cadaalad keenno, kii shilin cuna isagaa la waayayaa, Qof kasta oo Aqoon leh meeshiisaannu u dhiibaynaa Insha Allaah.” Sidaa ayuu yidhi Faysal.
Faysal Cali Waraabe oo ka hadlayey Hablaha Reer Somaliland ee Muqdisho tegay, waxa uu yidhi; “Hableheennii yaryaraa baa looga heesayaa Xamar, kuwaa Xamar tegay ee yar-yarna Faysbuugga ku caaya, waa Khaayimiin, waa dulli, waa waxaa dalkooda iyo Dadkii Dadkooda dilay u tegay, waa inaynu Faysbuugga ka dhignaa Fidmo, Dad uraya oo innaga Xumaaday ka sheega walaallayaal wixii innaga taga halkaa ee Dadkii Jasiira innagu xasuuqa u tega, waxaad u aragtaan inay yihiin Dad aan caqli lahayn. Markaa, Dhalinyaroow kaca, idinka talada qabsada, Codka idinka ayaa leh.”
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID